Haweeney si la-yaab leh iskeed isku dishay degmo ka tirsan Muqdisho – Warfaafiye:
Haweeney si la-yaab leh iskeed isku dishay degmo ka tirsan Muqdisho
Ali Mohyadin Apr 15, 2018 0
Haweeney lagu magacaabi jiray Xaawo Cali Maxamed ayaa iskeed isku daldashay degmada Yaaqshiid gaar ahaan daarta Wiif. Waxaana la sheegay in haweeneydaan ay qabtay xanuun dhanka miyirka ah.
Haweeneyda oo lagu magacaabi jiray Xaawo Cali Maxamed oo fiidnimadii caawa is-dishay ayaa aheyd qof xaas ah, waxaana ehelkeeda ay sheegeen in gurigii ay deganeyd ay isku soo xirtay kadibna ay xariga u isticmaashday dilkeeda.
Mahad Cabdulle Macow Maxamed oo ay Ilmo Adeer yihiin Haweeneyda isdishay oo ayaa faah afahin ka bixiyey qaabka ay isku dishay Walaashiis iyo Xanuunka haayay intaba.
“Ninyahow aniga waan ka maqnaa guriga waa la isoo wacay waxana ley sheegay in walashey ay isdishay Qolkeeda ayay dhexda ka soo xiratay kadibna xarig ayay isku daldashay xiligaas Ninkeeda Shaqo ayuu ku maqnaa aniga ayaa u imid oo xarigii ka furay,runtii xanuunkii maskaxda haayey sanadkii u dambeeyey wuu ku soo darsaday taas ayaa keentay in ay isdisho ayuu yiri Mahad oo ay walaalo yihiin Xaawo Cali Maxamed ee isdishay”
Sidoo kale waxa uu sheegay in aysan jirin wax dhibaato ah oo ay u geysatay Carruurteeda oo ah laba Wiil,isla markaana Meydkeeda ay geeyeen Xarunta dembi-baariista ee CID-da oo uu ku amray taliyaha Saldhiga degmada Yaaqshiid.
Dhacdadaan ayaa waxaa aad uga naxay dadka ku nool Xaafada Sarta Wiif e degmada Yaaqshiid oo ay dhacdadaas ka dhacday.